पतिलाई कोरोना लागेपछि क्‍वारेन्टाइनबाट भागिन् पत्‍नी, घर पुगेर होली ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पतिलाई कोरोना लागेपछि क्‍वारेन्टाइनबाट भागिन् पत्‍नी, घर पुगेर होली !
पतिलाई कोरोना लागेपछि क्‍वारेन्टाइनबाट भागिन् पत्‍नी, घर पुगेर होली !
भारतको बेंग्लुरुस्थित गुगलका एक कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएपछि क्वारेन्टाइनमा रहँदैआएकी उनकी पत्नी त्यहाँबाट भागेकी छन् ।
शुक्रबार ती महिला भागेर आग्रास्थित निवासमा पुगेको बताइएको छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएकी ती महिला क्वारेन्टाइनबाटै भागेपछि सरकारले उनको खोजी गरेको थियो । बेंग्लुरुबाट उनी जहाजबाटै दिल्ली र रेलबाट आग्रा पुगेको बताइएको छ । साथै उनले अभिभावकसँग होली समेत मनाएको भेटिएको हो ।
२५ वर्षीया ती महिलालाई सरोजिनी नैदु मेडिकल कलेजस्थित आइसोलेसन वार्डमा लगी परीक्षण गरिएको छ । तर परीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको छैन । साथै रेलवे अधिकारीहरुले उनका बावु र बहिनीहरुलाई १४ दिनका लागि क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिएका छन् ।
गुगलका कर्मचारी रहेका उनका पति र ती महिला हालै इटलीबाट हनिमुन मनाएर फर्किएका थिए । उनका पतिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बेंग्लुरु अस्पतालमा लगिएको छ । श्रीमानलाई पनि संक्रमण देखिएको थाहा पाएपछि ती महिला क्वारेन्टाइनबाटै भागेकी हुन् ।
भारतमा ८० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको छ । तर दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छ । दिल्लीमा एक ६८ वर्षीया महिला र उत्तर कर्नटकामा ७६ वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो । चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण हाल विश्वका अधिकांश देशमा फैलिएको छ ।
मेरो र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कुनै सहमति भएको छैन, ढुक्क पर्नुस् : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
कलंकीमा सडकबाट लडेर एक जनाको मृत्यु
उताबाट ‘म प्रधानमन्त्री बोलेको’ भनेपछि म त ओछ्यानबाट जुरूक्कै उठें
गोकुल बास्कोटालाई बालकोट छोड्न स्थानियको अनुरोध
क्वारेन्टिन बस्नेलाई भूमिहीनको उपहार दुना टपरी र तरकारी